Matt Dillon naBernadette Peters Vanojoinha High Desert Squad | Ndinobva ku mac
Matt Dillon naBernadette Peters vanobatana nechikwata cheHigh Desert
Nhau dzezvekutanga zvemukati zveApple TV + hadzimire. Iye zvino tinowana kuwedzerwa kwevatambi vatsva kuHigh Desert project, ine nyeredzi Patricia Arquette. Takambokuudzai kuti chirongwa ichi chiri kutanga asi kuti pakanga pachine mipendero yakawanda yekuvhara. Zvishoma nezvishoma zvinozadziswa. Imwe yacho yaive yekuziva kuti ndiani aizoperekedza Patricia uye vane rombo rakanaka ndivo Matt Dillon, Bernadette Peters naChristine Taylor.
Mwedzi nehafu yapfuura Ben Stiller akatengesa kuApple yaive komedhi yake yechipiri yeiyi svikiro. High Desert, yakagadzirwa nemutambi ane mukurumbira, anorondedzera mafambiro eaimbopindwa muropa akatendeuka akazvimirira oga mushure mekufa kwaamai vake. Patricia Arquette achave nebasa rekupa hupenyu kumunhu uyu anonzi Peggy. Asi hausi kuzova wega murwendo urwu nekuti zvino zvave kuzivikanwa kuti vamwe vatambi vachamuperekedza pachiitiko ichi: Matt Dillon, Bernadette Peters naChristine Taylor.
Dillon kutamba ex yaPeggy, Denny, ane hutsinye parole uye ane hutsinye mushandisi, uku Shamwari ichiridza Guru Bob, aimbove muenzi uyo anozvitumidza zita rekuti munhu asinganzwisisike mushure mekusangana nekushungurudzika kunochinja hupenyu. Garrett achatamba Bruce, muongorori akazvimiririra anohaya Peggy kuti ashande pabhizinesi rake riri kudzikira.
Idzi ndidzo nyeredzi dzine mukurumbira, asi iyo yakaumbwa yese inogadzirwa pamwe chete Rupert Shamwari, Brad Garrett naWeruche Opia. Hunhu hwaOpia, Carol, hunoratidzika kunge hwakagadziridzwa zvakanyanya pachikwata chitsva. Carol ishamwari yepamoyo yaPeggy uye mukomana anofinha wachiremba weER. Ndiyewo amai vekurera vatsva "vane chakavanzika chavo." Peters achaita basa rinodzokororwa saRosalyn, amai vaPeggy, uye Taylor achadzokera zvakare kuve hanzvadzi yaPeggy, Diane. Zvese izvi, zvinoenderana nekunyuza kwakaunzwa nehunyanzvi hwepakati Variety.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Matt Dillon naBernadette Peters vanobatana nechikwata cheHigh Desert
Iwe unogona ikozvino kushanyira akawanda US Apple Stores pasina kupfeka mask
Apple Fitness inogona kuwedzera zvemukati mune mimwe mitauro munguva pfupi